झण्डै डुबेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कसरी उक्लियो नाफामा ? - Parichay Network
झण्डै डुबेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कसरी उक्लियो नाफामा ?
परिचय नेटवर्क द्वारा	 ७ चैत्र २०७६, शुक्रबार १४:३२ मा प्रकाशित
समस्याका चाङ हटाउन अनेक प्रयास भयो । नीतिगत रुपमा पनि केही सुधार भए । जसका कारण उठ्नै नसक्ने गरी समस्यामा फसेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बौरिएर आयो । अघि संस्था सकियो भनेर टाढिएका सेवाग्राही पनि क्रमशः बैंकसँग जोडिन थाले । विश्वास भरिँदै आयो । क्षमता बढ्दै गयो । यसबीचमा धेरैका आशङ्का क्रमशः हटेर विश्वासमा परिणत भए भने बंैकमा रहँदाका कामचोर प्रवृत्तिहरु लगनशीलतामा परिणत भए । जसको परिणाम आज राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक एक सबल संस्थाको रुपमा स्थापित हुन पुग्यो ।
यही अवधिमा बैंकले भौतिकरुपमा पनि धेरै सुधार गरेको छ । सरसफाइदेखि व्यवस्थापनमा समेत सुधार भएको छ । कर्मचारीको काम गर्ने शैलीसमेत बदलिएको छ । पूर्णरुपमा बदलिन त समय लाग्ला, तर गुणात्मक परिणत भएको छ । उनले बैंकको सुधारका क्रममा देखिएको विषय जोड्दै भनेन्नुभयो, “जनतालाई यसको अनुभूति भएको छ, निजी बैंकसँगको प्रतिस्पर्धामा सँगैसँगै हिँडेको अनुभूति भएको छ ।”
यो सुधार रातारात भएको होइन, यसको जग विसं २०५९÷६० बाट वित्तीय सुधारको कार्यक्रमपछि हुँदै आएको छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार आएको छ । लेखा प्रणालीलाई दुरुस्त पारिएको छ । खराब कर्जा धेरै घटेको छ । कामको आवश्यकताअनुसार कर्मचारी सङ्ख्यासमेत घटाइएको छ । यसले बैंक अब पूर्णरुपमा व्यावसायिक भएको पनि देखिन्छ ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर श्रेष्ठ आउँदा बैंकमा स्रोत धेरै भए पनि प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसकेको अवस्था थियो । निक्षेप धेरै भएको तर ऋण भने कम थियो । उनले भने, “प्रतिशतको हिसाबले ८० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्थ्यौँ, तर हामी ५६ प्रतिशतमा मात्रै थियौँ । म आउँदा रु ८० अर्ब कर्जा थियो, हाल १५४ अर्ब पु¥यायौं ।”
सरकारी संस्था भनेपछि राजनीतिक गतिविधि बढी हुनु सामान्यजस्तै छ । बैंकमा ट्रेड युनियनको समस्या पनि निकै थियो । त्यसलाई समेत व्यवस्थापन गरेर बैंक अगाडि बढेको छ । “ट्रेड युनियनले उठाएका समस्यालाई समयमै सम्बोधन गर्न लाग्यौँ । गुनासो आउनै नदिने गरी युनियनमा पनि अपनत्वको भावना विकास ग¥यौं। यसले काम गर्ने वातावरण बनायो । म आफैँ नेपाल बैंकमा कर्मचारीका रुपमा काम गरेको अनुभवका आधारमा व्यवस्थापन गर्न सहज बन्यो”, उनले भने ।
अन्य वाणिज्य बैंकहरुले नाम मात्रको सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको काम गर्ने गरेकामा वाणिज्य बैंक त्यसमा समेत अग्रणी रहेको छ । कानूनअनुसार मुनाफाको एक प्रतिशत त्यसमा छुट्याउनै पर्छ । रु पाँच अर्ब चार करोड मुनाफा गरेको बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सातै प्रदेशमा बाल अस्पताल खोल्न रु ५० लाख सहयोग गरेको छ । मुटुरोग विशेषज्ञ डा भगवान कोइरालाले स्थापना गर्न लागेमने बाल अस्पताललाई सहयोग गरेर बैंकले नाम मात्रै राखेको छैन, सामाजिक योगदानमा ठूलो छाती गर्न सकिने उदाहरण नै प्रस्तुत गरेको छ ।
कुनै समय झण्डै समस्याग्रस्त ऋण मात्रै रु १२ अर्ब थियो । डेढ दशक अघि बैंक आर्थिकरुपमा जर्जर थियो । ठूलो मेहनत र सुधारसँगै गत आवमा बैंकले थप रु १२ अर्ब नकारात्मक ऋणलाई सकारात्मक बनायो । डुब्नै लागेको ऋण उठ्यो । श्रेष्ठले भने, “काम गरेपछि हुँदो रहेछ नि रु म आउँदा दुई अर्ब १२ करोड नाफा थियो, स्रोतको परिचालन गरेर त्यसयता अहिले मुनालाई बढाएर लाभांशसमेत दिन सफल भयौँ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय उपकरण सकारात्मक बनायौँ र सफल भयौँ ।”
यही चैत २९ गते चार वर्षे कार्यकाल पूरा हुँदैछ श्रेष्ठको । यस अवधिमा सार्वजनिक संस्था सरकारको सहयोगको बलियो र सुरक्षित आधार हुँदाहुँदै पनि जनतामा राम्रो छाप छैन । सार्वजनिक संस्थाको ‘इमेज’मा परिवर्तन गरेर जनताको विश्वास जित्न सफल भएको उहाँको दाबी छ । त्यसका लागि उहाँले एउटा नारा नै दिनुभयो । त्यो नारा थियो ‘क्लिन एण्ड स्मार्ट आरबिबी, विथ कन्सोल्डेसन’ । बैंकका सबै शाखा कार्यालय प्रविधिमैत्रीदेखि ग्राहकमैत्री बनाइयो । धेरै गर्मी हुने तराईका सबै शाखामा वातानुकूलित जडान गरियो । ग्राहकलाई गर्ने व्यवहारमा आकाश जमिनको परिवर्तन गरियो ।
बैंकमा अब के काम बाँकी रह्यो त रु श्रेष्ठले भने, “सुदृढीकरणको काम बाँकी छ । पुराना ऐन नियम, कार्यविधि पुनरावलोकन गर्न बाँकी छ । यसमा केही संशोधन र समयानुकूल सुधार गर्न बाँकी छ ।”
सहुलियतपूर्ण कर्जा सहजरुपमा पाइएन भन्ने गुनासो छ नि ? श्रेष्ठ भन्छन्, “निवेदन दिएको भरमा पैसा पाइँदैन । प्रमाणपत्र दिएको भरमा पैसा पाउँदैन । पैसा परियोजनालाई दिने हो ।” बैंकले विद्यार्थीलाई सोझै पैसा दिँदैन । अध्ययन गरिरहेको कलेजलाई दिन्छ । परियोजनामा काम गर्नेलाई आफ्नो काम के हो त्यो चाहियो । धेरैलाई काम गर्ने परियोजना नै बनाउन नआउने अवस्था देखेको श्रेष्ठको बुझाइ छ । प्राविधिक ज्ञान नै छैन, कसरी कर तिर्ने भन्ने जानकारी छैन ।
कम्पनी ऐनअनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नुपर्छ तर सरकारी स्वामित्वको बैंक भएकाले यो विषय हाल छलफलकै क्रममा छ । कुनै निर्णय भएको छैन । यसअघि सरकारकै निर्देशनमा एनआइडिसीलाई मर्ज पनि गरिसकेको छ । सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा नै राख्ने कि शेयर बिक्री गर्ने भन्ने विषय बैंकको भन्दा पनि सरकारको विषय भएको बताउँछन् ।
उनले सरकारसँग भएको सम्झौताभन्दा थप ५० प्रतिशत काम आफूले गरेको उल्लेख गर्दै भने, “सबैलाई विश्वासमा लिएर समूहमा काम गर्ने हो । त्यसले नै आफू र संस्था दुवै सफल हुन्छ । अब तोकादेशले कुनै पनि संस्था चल्दैन ।” पारदर्शी हुने कुरा पनि ठूलो रहेछ । मैले गर्ने जुनसुकै निर्णय समूहको निर्णय हो । सामान्य कुरा पनि १५ देखि २० जनाले थाहा पाउने प्रणाली स्थापित गरेको छु । कुनै कर्मचारीलाई कारवाही गर्दा होस् वा पुरस्कार दिँदासमेत सबैले थाहा पाउने अवस्था छ । रासस